Global Voices teny Malagasy » Shily: Fikambanana Voalohan’ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Aogositra 2017 16:26 GMT 1	 · Mpanoratra Rosario Lizana Nandika miora
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2007)
Vondrona iray misy bilaogera no nanapaka hevitra ny hanao Fikambanana ho an'ireo Shiliana Bilaogera [ES] . Ny hevitra dia teraka avy amin'ny ahiahy momba ny tsy fananana fomba fiseraserana voarindra. Araka ny fanazavan'izy ireo:
Vondrona iray misy ireo tsara sitrapo manana tanjona iraisana izahay, izay avy amin'ny weblogs, katsahanay ny hampivelatra ireo fandraisana andraikitra iombonana avy aminà sehatra samihafa. Mikasa ny hampiroborobo ny serasera sy ny demokrasia amin'ny alalan'ny aterineto izahay, mikaroka fanehoana ny hevitray, fifantohana amin'ireo hetahetanay, ireo hevitray ary ireo tanjonay ho eo ambany tafo iray voalamina izay mampiray ny tsirairay tsy misy fanilikilihana.
Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy misy hevitra politika, finoana na ideolojika mikasika ny fikambanana, sady koa manolo-tena hanatanteraka ny hevitr'ireo bilaogera amin'ny fizaràna fomba fijery mivelatra, sy habaka andraisan'ny rehetra anjara.
Nanomboka tamin'ny volana Novambra 2006 ity vondrona ity ary efa misy mpikambana 300 sahady volana roa taorian'ny niforonany . Maniry ihany koa izy ireo ny hanaparitaka ny fampiasàna ny teknolojia. Nanomana fanentanana iray ho fampianarana mamaky teny sy manoratra nomerika izy ireo tany amina sekoly iray ary mikasa ny hanao bebe kokoa. Saingy ny tena ifantohany dia ny famokarana habaka iray handraisan'ny rehetra anjara. Amin'ny maha fikambanana tsy mitady tombony ara-bola azy, eo ampitadiavana mpanohana ihany koa ry zareo mba hanampy azy ireo handroso.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/17/105367/
 Fikambanana ho an'ireo Shiliana Bilaogera [ES]: http://www.achib.cl/blog/